मुख्य उत्पादन निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन मुख्य उत्पादहरु लाई फैक्टरी
थ्री किम रेलिंग
रेलिंग मुख्य रूपले AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 र EN1317 मानकको पालना गर्नु हो। यसको लागि सामग्री मुख्यतया Q235B (S235Jr उपज शक्ति २ 235 एमपीए भन्दा बढि हो) र Q345B (S355Jr उपज शक्ति5345 एमपीए भन्दा बढि हो) हो। रेलिंग को मोटाई को लागि मुख्य रूपमा २.6767mm को 4.0.०mm को माध्यमबाट। सतहको उपचार तातो डूबा जस्ती गरिएको छ, AASHTO M232 लाई पछ्याउन र AASHTO M111, EN१61१ etc. जस्ता बराबर मानक आदि। सडकलाई डिमा विभाजन गर्नका लागि डिजाइन गरिएको रेलिरेल ...
रेलिंग मुख्य रूपले AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 र EN1317 मानकको पालना गर्नु हो। यसको लागि सामग्री मुख्यतया Q235B (S235Jr उपज शक्ति २ 235 एमपीए भन्दा बढि हो) र Q345B (S355Jr उपज शक्ति5345 एमपीए भन्दा बढि हो) हो। रेलिंग को मोटाई को लागि मुख्य रूपमा २.6767mm को 4.0.०mm को माध्यमबाट। सतहको उपचार तातो डूबा जस्ती गरिएको छ, AASHTO M232 लाई पछ्याउन र AASHTO M111, EN१61१ etc. जस्ता बराबर मानक आदि। सडकलाई फरकमा विभाजन गर्नको लागि डिजाइन गरिएको रेलिंग ...
पोस्ट मुख्य रूपमा AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 र EN1317 मानकको पालना गर्नु हो। यसको लागि सामग्री मुख्यतया Q235B (S235Jr उपज शक्ति २ 235 एमपीए भन्दा बढि हो) र Q345B (S355Jr उपज शक्ति5345 एमपीए भन्दा बढि हो) हो। रेलिंग को मोटाई को लागि मुख्यतया mm.० मिमी को लागी .0.० मिमी को लागी वा ग्राहकहरु को माग पालन गर्नुहोस्। सतहको उपचार तातो डूबा जस्ती गरिएको छ, AASHTO M232 लाई पछ्याउन र AASHTO M111, EN१61१ etc. जस्ता बराबर मानक इत्यादि पोस्ट स्थापना गरिएको छ ...
पोस्ट मुख्य रूपमा AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 र EN1317 मानकको पालना गर्नु हो। यसको लागि सामग्री मुख्यतया Q235B (S235Jr उपज शक्ति २ 235 एमपीए भन्दा बढि हो) र Q345B (S355Jr उपज शक्ति5345 एमपीए भन्दा बढि हो) हो। रेलिंग को मोटाई को लागि मुख्यतया mm.० मिमी को लागी .0.० मिमी को लागी वा ग्राहकहरु को माग पालन गर्नुहोस्। सतह को उपचार तातो डूबा जस्ती छ, AASHTO M232 अनुसरण गर्न र समान मानक जस्तै AASHTO M111, EN1461 इ। पोस्ट स्थापना छ ...
गोलाकार आकार पोष्ट
टर्मिनलको अन्त मुख्यतया AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 र EN1317 मानकको पालना गर्नु हो। यसको लागि सामग्री मुख्यतया Q235B (S235Jr उपज शक्ति २ 235 एमपीए भन्दा बढि हो) र Q345B (S355Jr उपज शक्ति5345 एमपीए भन्दा बढि हो) हो। टर्मिनल को मोटाई को लागि मुख्यत: २.mm मीमी देखि mm.० मीमी मार्फत वा ग्राहकको माग अनुसरण गर्नुहोस्। सतह उपचार AUSHTO M232 र AASHTO M111, EN1461 इत्यादी बराबर मानक को अनुसरण गर्न, जस्ती इस्पात जटिल छ, टर्मिनल ई ...
बोल्टहरू एएनएसआई B1.13M मा ग्रेड g g सहिष्णुताको लागि परिभाषित छन्। बोल्ट सामग्री कक्षा 6. for को लागि ASTM F568M मा अनुकूल छ। जंग प्रतिरोधक बोल्टको लागि सामग्री ASTM F 568M लाई कक्षा 8..8383 को लागी बनाइएको छ। बोल्ट सतह उपचार AASHTO M232 अनुसरण गर्नेछ। धुनेको लागि सामान्य आकार * 76 *। 44 * mm मिमी छ, र हामी ग्राहकको रेखाचित्र अनुसरण गर्न सक्छौं। परावर्तकका लागि रंग सँधै सेता, रातो र पहेंलो हुनुपर्दछ, तपाईं आफैले तिनीहरूलाई मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ। बोल्ट र नटहरू गार्डर फास्ट गर्नका लागि छन् ...